China Abavelisi beeplasiplate zaseChina kunye nabaXhasi - iChaolian Elektroniki
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeCopper > Ipeyinti yobuso
I-faceplate eyenziwe e-China inokuthengwa kwi-Chaolian Electronic ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
Uhlobo lwe-Faceplat 86 Uhlobo lwe-1
Le Faceplat 86 Type 1 Port isetyenziswa ngokubanzi ezindlwini, kwiinkampani, kumaziko okufundisa nakwezinye iinkqubo zekhabhathi eyakhiweyo.Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye inolwakhiwo olulungileyo, olwenza ukuba lube nezatifikethi ze-UL / RoHS / CE.
Uhlobo lwe-Faceplat 86 Uhlobo lwe-2
Le Faceplat 86 Type 2 Port isetyenziswa ngokubanzi ezindlwini, kwiinkampani, kumaziko okufundisa nakwezinye iinkqubo zekhabhathi eyakhiweyo.Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye inolwakhiwo olulungileyo, olwenza ukuba lube nezatifikethi ze-UL / RoHS / CE.
I-Faceplat 86 Uhlobo lwe-3 Port
Le Faceplat 86 Type 3 Port isetyenziswa ngokubanzi ezindlwini, kwiinkampani, kumaziko okufundisa nakwezinye iinkqubo zekhabhathi eyakhiweyo.Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye inolwakhiwo olulungileyo, olwenza ukuba lube nezatifikethi ze-UL / RoHS / CE.
I-Faceplat 86 Uhlobo lwe-4 Port
I-Faceplat 86 yohlobo lwe-4 Port: Olu hlobo lobuso linokwenziwa izibuko eli-1, ii-2ports, ii-3ports kunye neeports ezi-4. Inokutshatisa ibhokisi yohlobo oluyi-86. Inkqubo engqongqo yokuqinisekisa umgangatho, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, ul njl.
Ibhokisi yangasemva ye-UK Fype Faceplate 4 port
Olu hlobo luyiBhokisi engemva ye-UK Fype Faceplate 4 port. Sibonelela ngebhokisi yangasemva, i-faceplate, i-jack yelitye elingundoqo, ibhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. , Iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
Umva weBhokisi ye-120 yohlobo lwe-Faceplate
Olu hlobo yibhokisi ebuyayo yohlobo lwe-faceplate eyi-120. Sibonelela ngebhokisi yangasemva, i-faceplate, i-jack yelitye elingundoqo, ibhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. , Iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Ipeyinti yobuso abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Ipeyinti yobuso eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.